TTSweet: March 2010
Posted by T T Sweet at 10:51 PM 8 comments:
ဒီဟင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ်၊ ၈နှစ်လောက် မြန်မာပြည်ပြန်တုံးက နာမည်ကြီး မြန်မာထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စားဘူးတာပါ။ သူချက်ထားတဲ့ ကြက်သား ကာလသမီးချက်လေးက စပါးလင်နံ့လေးမွှေးပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ အမှတ်တရပါပဲ။ ကြက်သား ကာလသားချက်ကိုပဲ နာမည်လေးထူးအောင်ပေးပြီး ဟင်းချက်နည်းလေး နဲနဲဆန်းထားတာပါ။ စားပြီးတော့ ဟင်းချက်နည်း စာအုပ်လေးပါ လာရောင်းလို့ ၀ယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ နန်းစန်းစန်းအေးရဲ့ အဓိပတိ ဟင်းချက်နည်း နှင့် ဟင်းအတွဲအစပ်များ စာအုပ်လေးပါပဲ။
စင်္ကာပူပြန်ရောက်တော့ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ကြက်သားကာလသမီးချက်ကို သူပြောတဲ့ အတိုင်းချက်ကြည့်ပြီး အလွန်ကြိုက်လို့ အိမ်မှာ မကြာခဏချက်စားတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ အိမ် ၇အိမ်လောက် ပြောင်းအပြီးမှာ စာအုပ်လဲပျောက်၊ ဟင်းချက်နည်းကလဲ နဲနဲတော့ ကွဲလွဲနေမလား မသိနိူင်တော့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ချက်ထားတဲ့ ဟင်းလေးကတော့ စားလို့ကောင်းဆဲပါ။ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ထားလို့ ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆန်းဆန်းပြားပြားဟင်းတစ်ခွက် မဟုတ်ပေမဲ့ ချက်ရလွယ် စားလို့လဲ ကောင်းပါတယ်။ အရင်က ကိုယ်ချက်ဘူးတဲ့ ကာလသားချက်ထက် အများကြီး အရသာရှိပါတယ်။ အဲဒီတုံးက စပါးလင်နဲ့ ငါးငံပြာရည်မထည့်ပါ။
ကြက်သားကို ခုတ်ထစ်ပြီး ငါး(သို့) ပုဇွန်ငံပြာရည်၊နနွင်းအနည်းငယ်၊သကြားအနည်းငယ်၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်၊ ငရုပ်သီးအရောင်တင်မှုန့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၂လုံးခန့် လှီးထားတာရယ်၊စပါးလင်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊-နီ၊ထောင်းထားတာနဲ့ နယ်ပြီး ၁၅မိနစ်ခန့် နှပ်ထားပါ။ နယ်တဲ့အခါ အသားထဲ ဆားပျားရောက်အောင် လက်နဲ့ နာနာဖိ၊ ဆုတ်နယ်ပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ကြက်သားအပြင် ကြက်ခြေထောက်ရိုးလို တောင်ပံမျိုးလို လည်ပင်ရိုးလို အရိုးများများနဲ့ ချက်ရင်တော့ ဟင်းက ပိုချိုမှာ အသေအချာပါပဲ။
ငရုပ်သီးခြောက် အတောင့်လိုက် ၃-၄တောင့်လောက်ထည့်ပြီး မီးအနေတော်နဲ့ တည်ပါ။
တည်နေရင်း ဆီသံဖျစ်ဖျစ် မြည်ရင် အသာမွှေပေးပါ။ ကပ်ခါနီးပြီဆို ငရုပ်ဆုံဆေးရေလေးထည့်
ကြက်သားကျက်လောက်အောင် မီးအေးအေးနဲ့ အဖုံးပိတ်ပြီးတည်ထားပါ။ စလုံးက ကြက်သားကတော့နုတော့ ၁၅မိနစ်လောက်ဆို ရပါပြီ။ ကြက်သားနူးပြီဆို ဗူးသီး အတုံးကြီးကြီး တုံးထားတာကိုထည့်၊ ရေမြုတ်အောင်ထည့်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ ထပ်တည်ပါ။ ဗူးသီးလဲနူး ကြက်သားထဲက အချိုရည်လဲ ဗူးသီးထဲ စိမ့်ဝင်ပြီဆို ရေစပ်စပ်လေးနဲ့ စပါးလင်နံ့သင်းတဲ့ ဗူးသီးကာလသမီးချက်ရပါပြီ။ ပိုမွှေးအောင်ချခါနီး ငရုပ်ကောင်းလေးထပ်ထည့်ပါ။ဆားပေါ့ရင်တော့ ငါးငံပြာရည်လေးခပ်ပါ။ အိမ်မှာတော့ အဲဒီဟင်းချက်ရင် ဟင်းအစပ်အနေနဲ့ သခွါးသီးကိုခြစ်၊ သံပုရာသီး၊ မြေပဲဆံထောင်းနိူင်နိူင်နဲ့ သုတ်တာမျိုး၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုတ် လိုဟာမျိုးနဲ့ စားလေ့ရှိပါတယ်။
ခူးခပ်ပြီး စားဖို့ရာ အဆင်သင့်။ ပဲတီချဉ်သုတ်လေးနဲ့။
ဆန်ဆေးရေ မိုင်လို ပုလင်းလောက်အရွယ် ပုလင်းထဲထည့် ၊ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းထည့် ၊ ထမင်း စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်း ချေထည့် (မခဲနေရဘူးလို့ ဆိုလိ်ုတာပါ) ပြီးရင် ပဲတီချဉ်ကို လုံးဝ၊ လုံးဝ ရေမဆေးပဲ ဈေးက၀ယ်လာတဲ့ အတိုင်းထည့်၊ ပုလင်းအဖုံးလုံအောင်ပိတ်၊ ၃ရက်တိတိ အဖုံးမဖွင့်ပဲ ထားပါတဲ့။ အပေါ်မှာ ပုလင်းအရွယ်လေး မှန်းရလွယ်အောင် ပုံလေး တင်ပေးထားပါတယ်။ ချဉ်ရင်လဲ ပြောကြပါဦးနော်။
Posted by T T Sweet at 8:42 PM 18 comments:
Labels: (၃ ၀၀) မြန်မာ ဟင်းများ, (၃- ၈) ကြက်ကာလသမီးချက်
Posted by T T Sweet at 10:52 AM3comments:
ဘလော့မှာ အသစ်ရေးဖို့ မအားတာနဲ့ သမီး ၄နှစ်သမီးလောက်က အဖြစ်ကလေး ရေးထားဖူးတာ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ပြီးခဲ့တဲ့စနေက သမီးကို လက်သည်းညှပ်ပေးဖို့ မေ့နေလို့ သမီးကို ခေါ်ပါတယ်။
" သမီးရေ လာအုံး လက်သည်းတွေ ညှပ်ရအောင်လေ ... "
သမီးအရုပ်တွေနဲ့ ဆော့နေရာကနေ ရောက်လာပြီး သူ့လက်သေးသေးလေးတွေကို မအေ့ရှေ့မှာ လာဖြန့်ပေးပါတယ်။ ညှပ်မယ်ဆို ကြည့်လိုက်တော့ လက်သည်းတွေ အကုန်လုံး တစ်ချောင်းမှရှည်တာမရှိ ... အားလုံး မညီမညာ တုံးတိတိတွေချည်းရယ်။
" သမီးရယ် ... မေမေ ပြောထားတယ်မလား ... လက်သည်းတွေ သွားနဲ့ မကိုက်ရပါဘူးဆို။ အဲဒါလက်သည်းထဲမှာ worm တွေရှိတယ် ... သမီးမရွံဘူးလား ... worm တွေက ဗိုက်ထဲရောက် ... ဗိုက်ထဲမှာ ကလေးတွေမွေး ... သမီးဗိုက်ထဲမှာ worm တွေ မိသားစုလိုက်ကြီး ဖြစ်နေကြမှာ မကြောက်ဘူးလား ... "
သမီးက worm တွေအကြောင်းကို discovery channel မှာ ကြည့်ဘူးလို့ သူသိတာနဲ့ နားလည်အောင် ရှင်းပြရတာပါ။ ဂျူဂျူ တစ်ယောက် ကတော့ သူ့အပြစ်အတိုင်း ငြိမ်နေပါတယ်။
" ဟိုတစ်ပတ်ကပဲ သမီး လက်သည်းမကိုက်တော့ပါဘူးလို့ မေမေ့ကို ကတိပေးထားတယ်လေ ... ပြီးတော့ ကတိကိုလဲ ဖျက်သေးတယ် ... သမီးကို လက်သည်းမကိုက်အောင် မေမေ ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်း မသိတော့ဘူး ...."
မအေက တပျစ်တောက်တောက်ဆူတော့ ဂျူဂျူးတစ်ယောက် သူ့အပြစ်နဲ့သူ ပထမတော့ ငြိမ်နေပါတယ်။ (အမှန်ကတော့ အကြံထုတ်နေတာပါ) ခဏနေတော့ ဥာဏ်ကြီးရှင် မဂျူနီယာခြိမ့် သူ့ဝသီအတိုင်း ဆင်ခြေပေးတော့ ဒေါ်ဆွိတီလဲ ထုံးစံအတိုင်း ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။
"မေမေကလဲ ... ဂျူဂျူက လက်သည်းတွေပဲ ကိုက်တာကို ...ခြေသည်းတွေတောင် မကိုက်ထားပဲနဲ့များ ..." တဲ့။
Last Saturday, I called my daughter to cut her fingernails.
"Honey, come here, I want to cut your fingernails."
My daughter came while she was playing with her dolls and showed her tiny fingers in front of me. When I saw her fingernails, all had been cut and short. Most of them were wavy and not been smoothly cut. They looked ugly.
" Oh Honey, I told you before that not to bite your fingernails. There are lots of germs and tiny worms are staying under your fingernails. Aren't you scared of them? When the worms go inside your stomach, later they deliver small baby worms and finally end up with big worm family inside your stomach."
Yes, she watched about the germs and worms in Discovery Channel, and I explained about it and hope she would understand well. Rachel kept quiet since she was in mistake by biting her fingernails recently.
"You promised me you won't bite your fingernails again, it was just last week. Now you broke your promise too. I have no idea how to explain to understand not to bite your fingernails."
Since I was nagging and nagging and explain her, Rachel still kept quiet as before.(Really she was thinking how to attack me back by words ;) Laterawhile, the genius Rachel talked back to me some thing . I was surprise and widely open my mouth what to tell her back.
The words she talked back to me was
" Oh Mom, I am biting only my fingernails, I have never thought about biting my toenails. You should be happy on it ."
Posted by T T Sweet at 3:33 PM 10 comments:
Posted by T T Sweet at 3:47 AM4comments: